Toeram-panjakan'i Hill malaza any India dia tsy maintsy tsidihinao
India dia iray amin'ireo trano onenan'ireo Himalaya izay fonenan'ny sasany amin'ireo tampon'isa lehibe indrindra eto an-tany. Izany dia mahatonga an'i India ho toeram-piantsonan'ny fiantsonan'ny havoana any avaratra, fa India atsimo kosa manana be dia be azo atolotra rehefa miresaka ny endrika sy hetsika mahavariana ao amin'ny gara iry, ny lanezy.
Nainital dia malaza amin'ny anarana hoe distrikan'ny farihy India. Nainital dia toerana mahafinaritra any amin'ny faritr'i Kumaon any amin'ny fanjakan'i Uttarakhand. Ireo tampon-tampona Naina, Ayarpatta, ary Deopatha manodidina ity tobin'ny havoana ity. Toeram-pizahan-tany maro no tototry ny mpitsidika. ny Ny farihin'i Naini, ny fomba fijerin'i Snow, ary ny zaridainan'ny zohy Eco dia toerana sasany amin'ireo toerana fizahan-tany malaza. Ny sambo ao amin'ny farihy Naini dia hetsika atolotra tsy maintsy raisinao rehefa eo ianao. Azonao atao ny manara-maso ny tariby tariby mankany amin'ny fomba fijerin'i Snow malaza hahazoana fomba fijery mahavariana momba ny tendrombohitra.
Mba hahitana ireo tendrombohitra rakotra lanezy feno lanezy sy hiaina oram-panala, ny Desambra ka hatramin'ny Febroary no fotoana tsara indrindra hitsidihana.
Toerana - Uttarakhand
Darjeeling no anaram-bosotra hoe Mpanjakavavin'ny Havoana. Ny dia malaza indrindra horaisinao any Darjeeling dia a Site UNESCO Heritage site Toy Train mitaingina. ny Farihy Senchal Ny tsara tarehy dia toerana mangina hitsidihana raha any Darjeeling ianao. ny Monasiteran'i Ghoom ary ny Monasiteran'ny Bhutia Busty dia toerana tsara hahitana ny fiainam-panahinao. Ny mpizahatany dia afaka mankafy mandehandeha amin'ny lalana sy tampon-tanàna samihafa avy any Darjeeling ary mankafy ny famonoana renirano koa rehefa eo ianao.
Mitadiava seranan-tsambo fidirana ara-dalàna mety indrindra amin'ny India e-Visa.
Toerana - Bengal Andrefana
Ny zava-maitso an'ity fiantsonana havoana ity dia hiantoka ny fametrahana ny sainao amin'ny toerana milamina sy milamina. Afaka mahita fambolena dite sy zava-manitra marobe ianao rehefa miampita ny tendrombohitra. Amin'ny fitsidihanao an'i Munnar dia ataovy izay hahitanao ny lalana mankany Hevitra hahazoana fomba fijery manaitra ary koa miantsoantso mafy araka izay tratranao. ny Rano Atukkal sy Chinnakanal any Munnar dia toeram-pandehanana ihany koa hahagaga ny hakanton'ireo rano misamboaravoara. Tokony hitodika any koa ianao Farihy Kundala raha any Munnar ianao. Raha mpiaro ny bibidia sy biby ianao dia tokony mankany Valan-javaboary Periyar izay manodidina ny 2 ora miala an'i Munnar hijerena biby amin'ny fonenany voajanahary.
Toerana - Kerala
Manali dia iray amin'ireo toeram-piantsonana malaza indrindra manerana an'i India ary manana traikefa an fidiranana mpizahatany an-tapitrisany isan-taona. Eo amoron'ny renirano Beas no misy ny toeran'ny havoana, ka rehefa mamakivaky an'i Manali ianao dia hahita ny ony miaraka aminao amin'ny toerana maro. Manali dia manolotra hetsika maro ho an'ny karazana mpandeha rehetra. Ho an'ireo tia rano, rafting ony any Manali dia mampientanentana izaitsizy miaraka amin'ny riaka be sy rano mikitoantoana. Raha tianao ny mamintina ny tampon'ny tampony hahatsapa ho mahafinaritra tahaka ny eo an-tampon'izao tontolo izao ianao, dia misy fotoana maro be dia be an-tongotra sy tampon'ny Manali manolotra anao handeha an-tongotra na bisikileta an-tendrombohitra hatramin'ny tampony.
Tempolin'i Hadimba, Tempolin'i Manu, ary Tempolin'i Vashishta dia vitsivitsy amin'ireo tempoly maro any Manali izay tsidihan'ny mpizahatany. Toerana malaza i Solang Valley fantatra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina maro. ny Riandranon'i Rahala dia tranonkala tsy maintsy tsidihina koa akaikin'i Manali.
Vakio ny antony maha-fotoana mahavariana an'i Monsoons handrafetana ny dianao mankany India.
Toerana - Himachal Pradesh
Mussoorie dia toerana fizahan-tany malaza sy malaza misy fidiran'ny mpizahatany mavesatra. Ny toerana misy ny havoana dia eo an-tendrombohitra Garhwal. Mussoorie dia manangana anao amin'ny fahafinaretana amin'ny masonkarena ny tandavan Himalayan sy ny lohasaha Doon. Ny farihy Mussoorie dia toerana tokony hitsidihanao raha mbola any ianao. ny malaza Kempty Falls dia mahafinaritra ihany koa ny mijery. Mussoorie dia manana valan-javaboary mahafinaritra ahafahanao mandray ziplining, fiakarana vato ary rappelling. Ao amin'ny Company Bagh dia afaka mankafy sambo ianao ary ho tian'ny zanakao ny fitsangatsanganana ao amin'ny voly fialamboly.
Toerana - Dehradun
Ny renivohitry ny fanjakan'ny Meghalaya dia manome fomba fijery mahavariana momba ny tampon-tampona ary amin'ny lohataona ny voninkazo dia mahavariana ny tanàna. Betsaka ny toerana ao Shillong sy ny manodidina haleha avy amin'ny farihin'i Umaim sy ny farihin'i Ward ka hatrany amin'ny tampon'ny Shillong. Ny fianjerana roa malaza ao Shillong dia Lavo elefanta sy mamy. Ho an'ny mpankafy tantara, ny tranombakoka Don Bosco dia toerana tsara hijerena ireo vakoka taloha. Azonao atao ny mandeha mitaingina sambo ao amin'ny farihin'i Ward raha mbola ao Shillong sy manao fanatanjahantena anaty rano ao amin'ny farihy Umaim. Raha tia tampon-tendrombohitra ianao dia afaka mitsangatsangana Làlana David Scott.
Toerana - Meghalaya
Kasol dia a gara tsara tarehy sy tsy dia mitsidika intsony. ny Ny reniranon'i Parvati dia mivezivezy amin'ny gara sy ny mpizahatany mitsidika matetika ny toerana misy ny ony. Ny lohasahan'i Tirthan akaikin'i Kasol dia toerana mahafinaritra sy mahafinaritra izay tian'ny mpizahatany mankafy fotoana mitokana sy miala sasatra mijery ny toerana. Ny olona izay misy traikefa an-tsehatra dia afaka mandeha amin'ny lalan'ny Chalal Trekking. Raha te-hiala sasatra sy hiala sasatra ao anaty pisinina ianao dia eo akaikin'ny kilometatra vitsivitsy ny pisidinan'ny rano mafana Manikaran. Toerana tsy maintsy jerenao rehefa ao Kasol ianao Kheer Ganga Peak ho an'ny sasany fomba fijery manaitra ny tandavan-tendrombohitra sy ny Thakur Kuan malaza.
Gulmarg dia gara tsara tarehy any amin'ny tanin'i Jammu sy Kashmir. Io ihany 50 kilometatra miala an'i Srinagar. Malaza ny tobin'ny havoana fantatra amin'ny hoe ahitra voninkazo. Ny ririnina no fotoana mety indrindra hipetrahana ao Gulmarg satria rakotra bodofotsy ny tampon-kavozy ary afaka mitaingina fiara misy tariby ianao amin'ny iray amin'ireo toerana avo indrindra any Gulmarg ary milalao, mitaingina ski ary mankafy ny lanezy. Betsaka ny traikefa nahafinaritra azonao raisina rehefa ao Gulmarg ianao. Azonao atao ny mitsangantsangana an-tampon'ny tampony saingy tsy atolotra mandritra ny ririnina izy ireo satria tsy ampoizina ny toetrandro.
Mpandeha bisikileta koa dia hetsika azonao atao any Gulmarg. Manodidina ny telo ambin'ny folo kilometatra miala an'i Gulmarg, ny farihy Alpathar dia farihy miendrika telozoro izay napetraka eo amin'ny toerana mahafinaritra. Nanjary mangatsiaka ny farihy hatramin'ny volana Jona ka ny fotoana mety hitsidihana azy dia eo anelanelan'ny Jolay ka hatramin'ny Oktobra.
Toerana - Kashmir
Ilay toerana dia fantatra amin'ny hoe Ekosy any Atsinanana. ny fofon'ny kafe mameno ny rivotra amin'ny kafe, indrindra amin'ny fotoam-pijinjana. Ny ahi-maitso main'ny havoana sy ny lanitra manga dia mahatsiaro tena ho toy ny any am-paradisa. ny Ny Monastery Namdroling dia tranonkala ara-pivavahana malaza akaikin'i Coorg. Misy riandrano roa manakaiky an'i Coorg izay tsy maintsy tsidihina koa, Abbey ary Iruppu.
The tranokala masina Talakaveri, ny niavian'ny renirano Cauvery dia eo akaikin'i Coorg ihany koa. ny Tobin'ny elefanta Dubbare any Dubbare dia adiny iray latsaka avy eo Coorg ary afaka ianao mankafy mandro elefanta Ery. Misy ihany koa ny tampon'isa kely toa an'i Brahmagiri sy Kodachadri azonao andehanana. Azonao atao koa ny mankafy ny rafting ony eo akaiky eo.
Toerana - Karnataka
Visa e-Tourista any India - Visa an-tserasera Indiana ho an'ny mpizahatany
Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana dia nanolotra fomba maodely amin'ny fampiharana Indian Visa Online. Ny fizotry ny fangatahana visa an-tserasera dia tsotra, mora, haingana ary azo atao avy amin'ny fampiononana ao an-tranonao. Tena tsara ho an'ireo mpangataka izany satria ny mpitsidika an'i India dia tsy takiana intsony amin'ny fotoana hanaovana fitsidihana ara-batana ny High Commission of India na ny masoivoho Indiana any amin'ny firenenao.
Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana mamela fitsidihana any India amin'ny alàlan'ny fangatahana Visa Indiana an-tserasera amin'ity tranonkala ity ho an'ny tanjona maro. Ohatra ny fikasana handeha ho any India dia misy ifandraisany amin'ny tanjona ara-barotra na orinasa, avy eo azonao atao ny mangataka izany Visa any India e-Business. Visa e-Tourista any India (Indiana Visa Online na eVisa India ho an'ny mpizahatany) dia azo ampiasaina amin'ny fifankahitana namana, fihaonana amin'ny havana any India, manatrika fampianarana toa ny yoga, na ho an'ny fahitana sy fizahan-tany.